ब्लगमा Bearish | Martech Zone
बुधबार, जुलाई 5, 2006 शनिबार, अप्रिल 16, 2016 Douglas Karr
News.com - ब्लगमा Bearish
Forbes.com - माइस्पेस बबल
ब्लगको विस्फोटनमा केही रोचक नोटहरू। कुनै 'बबल' को रूपमा, मान्छे पहिले नै 'फट' को बारेमा कुरा गर्दै छन्। मेरो व्यक्तिगत लिनु हो कि निक डेंटनले 'ब्लगमा बेअरीश' पाइरहेको छैन, ऊ राजस्व स्रोतको रूपमा नराम्रो ब्लगहरूमा बेर्सिश हुँदैछ। ब्लगहरू समयको साथ विकसित हुन जारी रहनेछ र वेबको प्रत्येक पक्षमा समाहित हुनेछ। जहाँसम्म, कुनै पनि वेब साइटको रूपमा, सामग्री राजा हुनुपर्दछ। यदि तपाई अर्को मान्छे भन्दा राम्रो लेख्नु भएको छैन भने, मान्छेहरु बोर लाग्नेछन् र छोड्नेछन्।
श्री डेन्टन जस्ता कम्पनीहरूको लागि जसले राजस्व स्रोतको रूपमा ब्लगहरू प्रयोग गरिरहेका छन्, यसको मतलब यो हो कि प्रत्येक ब्लग प्रविष्टि एक हत्यारा हुनु पर्छ। सामग्रीको लागि जुवा राजस्वमा ठूलो जोखिम समावेश छ - विशेष गरी जब त्यहाँ अरबौं पृष्ठहरू छन्।
म पैसाको लागि ब्लग गर्दिन (मैले खाने थिएँ भने खान सक्दिन)। बरु, म साथी, परिवार, र अन्य उद्योग पेशेवरहरूसँग कुराकानी गर्न ब्लग गर्दछु। यो मेरोलागि मेरा विचारहरू साझेदारी गर्न र अन्य व्यक्तिहरूको विचारहरू छलफल गर्नका लागि ठाउँ हो। यसले मलाई एक्सपोजर प्रदान गर्दछ र म आदर गर्नेहरूबाट प्रतिक्रिया खोज्छु।
टैग: ब्लगमा मद्दतब्लगब्लगिंगफोर्ब्समाइस्पेसनिक dentonमाइस्पेस बबल
चौथो व्यक्ति? पाँचौं व्यक्ति? व्याकरणात्मक व्यक्ति र मार्केटिंग
किन चलचित्र उद्योग असफल हुँदैछ, उत्तरकथा